မိရှဲ ပလတ်တီးနီ - ဝီကီပီးဒီးယား
မိရှဲ ဖော်န်ဆွဲ(ဆွာ) ပလတ်တီးနီ (ပြင်သစ်: Michel François Platini; ၁၉၅၅ ဇွန် ၂၁ မွေးဖွား) သည် ပြင်သစ် ဘောလုံးကစားသမား၊ မန်နေဂျာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုများကြောင့် ၂၀၁၅ ယူအီးအက်ဖ်အေ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ၎င်းကို ဘောလုံးအားကစားမှ တားမြစ်ခဲ့သည်။ သမိုင်းတစ်လျှောက် အကြီးကျယ်ဆုံး ဘောလုံးသမားများအနက် တစ်ဦးအဖြစ်ယူဆသတ်မှတ်ခြင်းခံရကာ ပလတ်တီးနီသည် ဘောလောန် ဒေါရ် (ရွှေဘောလုံးဆု) ကို ၁၉၈၃၊ ၁၉၈၄ နှင့် ၁၉၈၅ တို့တွင် သုံးကြိမ်ရရှိခဲ့သည်။ မဲပေးရွေးချယ်သော ရာစုနှစ်၏ အကောင်းဆုံး ဖီဖာကစားသမားများ၌ သတ္တမနေရာတွင် ရှိသည်။ ၎င်း၏အောင်မြင်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုသောအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အဆင့်ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် သင်္ဂဟဆု 'Légion d'honneur' အဖွဲ့သို့ ၁၉၈၅၌ သွတ်သွင်း သူကောင်း (Knight)[မှတ်စု ၁] ပြုခြင်းခံရသည်။ ၁၉၉၈တွင် (Officier) ဖြစ်လာသည်။ အေအက်စ် နန်စီ၊ စန်တေ့ယန်နာ (Saint-Étienne) နှင့် ယူဗန်းတပ်စ်(ဂျူဗန်တပ်) ကလပ်များတွင်ကစားခဲ့သည်။ ပြင်သစ်စကား 'Le Roi' (ဘုရင်) ဟူ၍ အမည်ပြောင်ကို ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ခေါင်းဆောင်မှုတို့ကြောင့် ရရှိခဲ့လေသည်။ အလယ်တိုက်စစ် ဖန်တီးရှင်အဖြစ် မူလက ကစားခဲ့သော်လည်း ပလတ်တီးနီသည် ဂိုးများစွာသွင်းယူသူလည်း ဖြစ်သည်။ စီးရီးအေ၏ 'ကပ်ပိုကနွန်း ညီယဲရယ်' (Capocannoniere - ဂိုးသွင်းအများဆုံးဆု) ကို သုံးကြိမ် (၁၉၈၃ ၊ ၁၉၈၄ ၊ ၁၉၈၅) ရရှိခဲ့သည်။ ယူဗန်းတပ်စ်၏ ၁၉၈၄-၈၅ အောင်မြင်ခဲ့သော ဥရောပဖလား(လက်ရှိ ချန်ပီယံလိဂ် အမည်ဖြင့် ကျင်းပ) တိုက်ပွဲစဉ်၌ ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင်ဖြစ်သည်။ ပလတ်တီးနီသည် ပြင်သစ် အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းအတွက် အဓိကကစားသမားဖြစ်ပြီး ၁၉၈၄ ဥရောပဖလားတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ယင်းပြိုင်ပွဲ၌ ဂိုးသွင်းအများဆုံးဆု၊ အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုများရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ နှင့် ၁၉၈၆ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆီမီးအထိ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့လေသည်။ Alain Giresse ၊ Luis Fernández ၊ Jean Tigana တို့နှင့်အတူ ၁၉၈၀နှစ်များ၌ ပြင်သစ်အသင်းအတွက် 'carré magique' ပဉ္စလက်အကွက် တည်ဆောက်ကစားခဲ့သည်။ ၂၀၀၇အထိ နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ဂိုးသွင်းရှင် စံချိန်ကို ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၄ ဥရောပဖလားရသော ပြိုင်ပွဲ၌သာ ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း ဥရောပဖလားပြိုင်ပွဲတွင် (၉) ဂိုးဆိုသည့် ဂိုးအများဆုံးစံချိန်ကို ထိန်းထားနိုင်ဆဲဖြစ်၏။
၂၀၁၀ စက်တင်ဘာတွင် ပိုလန်၌ တွေ့ရစဉ်
၆ ကြိမ် ယူအီးအက်ဖ်အေ ဥက္ကဋ္ဌ
၂၀၀၇ ဇန်နဝါရီ ၂၆ – ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၁
မိရှဲ ဖော်န်ဆွဲ(ဆွာ) ပလတ်တီးနီ
(1955-06-21) ၂၁ ဇွန်၊ ၁၉၅၅ (အသက် ၆၅)
AS Nancy ၁၈၁ (၉၈)
AS Saint-Étienne ၁၀၄ (၅၈)
Juventus F.C. ၁၄၇ (၆၈)
France Olympic ၇ (၄)
ပြင်သစ် အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း ၇၂ (၄၁)
ကူဝိတ် ၁ (၀)
ပြင်သစ် အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း
အနိုင်ရသူ Euro 1984
ကစားသူအဖြစ် အနားယူပြီးနောက် ပလတ်တီးနီသည် ပြင်သစ်နည်းပြအဖြစ် လေးနှစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ပြင်သစ်ကမ္ဘာ့ဖလားတွင် ပူးတွဲ စီစဉ်သူလည်းဖြစ်၏။ ၂၀၀၇တွင် ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသော ပထမဆုံး ကစားသမားဖြစ်လာသည်။ ဖီဖာအဖွဲ့၏ နည်းစနစ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ၊ ပြင်သစ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ စသည့်ရာထူးများကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ၂၀၁၅တွင် ဖီဖာ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကော်မတီက 'အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခ အခြေနေတစ်ရပ်'ကြောင့် ဘောလုံးအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မှ တားမြစ်ခဲ့သည်။
↑ ပြင်သစ်သူကောင်းပြုခြင်းတွင် အဆင့်ငါးဆင့်ရှိ၏။ ၎င်းတို့မှာ Chevalier (Knight) ၊ Officier (Officer), Commandeur (Commander) ၊ Grand officier (Grand Officer) နှင့် Grand-croix (Grand Cross)} တို့ဖြစ်ကြသည်။
↑ "Décret du 13 juillet 1998 portant promotion et nomination" (in French) (14 July 1998). Journal Officiel de la République Française 1998 (161). PREX9801876D. Retrieved on 25 August 2019.
↑ ၂.၀ ၂.၁ "Michel Platini" (in French)။4June 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Michel Platini Biography။ Soccer-fans-info.com (3 May 1973)။3August 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Michel Platini – Goals in International Matches။ rsssf.com (21 April 2011)။
↑ "Fifa: Sepp Blatter and Michel Platini get eight-year bans"၊ BBC Sport၊ 21 December 2015။ 21 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ European Footballer of the Year ("Ballon d'Or")။ RSSSF။ 13 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈.၀ ၈.၁ Elegance and intelligence personified in blue: Michel Platini။ FIFA.com။ 1 February 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မိရှဲ_ပလတ်တီးနီ&oldid=624196" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၁:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၁:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။